La géométrie égyptienne: contribution de l'Afrique antique à la mathématique mondiale - Afrikhepri Fondation
I-geometry yaseGibhithe: umnikelo we-Afrika yasendulo kwizibalo zomhlaba
Le ncwajana n ° 1 yesikhungo sase-Afrika se-Egyptology Cheik Anta Diop sidingida ulwazi oludala kakhulu lweJiyomethri olwalukhona futhi lwachuma eGibhithe ngesikhathi semi-pharaohs. Izixhumanisi azihlanganisiwe nezinye izinto ze-geometric zase-Afrika nolwazi olungaphandle kweNayile Valley. I-geometry yaseGibhithe ibekwa endaweni yayo yangempela yendabuko, yomlando namasiko.
Umsebenzi, omfishane nowenziwe ngokudidayo, ngaleyo ndlela ukhipha isiko lonke lomqondo wejometri wase-Afrika ezimeni ezithambekisiwe zamakhompiyutha anamuhla ezindawo.
Bekunzima ukugwema umlando walesi sakhi esihle futhi esiqinile somoya womuntu okuyi-geometry, ikakhulukazi njengoba amaGrikhi uqobo eye abonisa, ngamabomu, ukuthi ama-geometry abo athuthukisiwe kulokho okutholwe eGibhithe. Ngenhloso yawo nangendlela yawo, lo msebenzi kufanele ubhekwe njengomnikelo omkhulu ekwazini umlando wesayensi namasiko e-Afrika osasabhalwa futhi wahlolwa.
Ngabe kufanele sikhulume ngezibalo, isayensi yezinkanyezi, isayensi, izinkolo, ukungawunaki umnikelo wempucuko yabantu abamnyama baseGibhithe kwabanye abantu (abamhlophe, amaSemite).
Ukuhunyushwa kwegama lezibalo okwenziwa abaseGibhithe: indlela efanelekile yokuphenya ngemvelo ukwazi konke okukhona, imfihlo ngayinye, zonke izimfihlo).
Abantu abamnyama baseGibhithe ngaphambi kokungenelela (abamhlophe, abangamaSemite) basishiyela imithombo ebhaliwe yezibalo enjengokuthi:
I-papyrus yaseBerlin (zibalo zedigri yesibili, izimpande zesikwele)
I-Papyrus Boulaq 18 sithandana emuva eminyakeni engama-3700 (lapho sithola khona ubukhona be-zero). Encwadini yakhe Impucuko noma iBarbary, USolwazi Cheikh Anta Diop usitshela ukuthi:Ngenkulungwane yesithathu yeminyaka, abaseGibhithe base besungule ukubalwa kwenombolo futhi bathola noma babona u-zero, njengoba kufakazelwa ukufakwa kwesikhala lapho lapho besizokubeka khona namhlanje.
I-Papyrus of Kahun (ukubalwa kwenani lesilinda, izibalo, izibalo ezi-quadratic, izimpande zesikwele)
I-Moscow Papyrus (ubude 544 cm) 1850 BCE ngezinkinga ezingama-25: ukubalwa kokwenza isinkwa, ukwakhiwa kukabhiya, ukulinganiswa kweziqu zokuqala, inkinga yejometri, ivolumu yephiramidi encishisiwe, ingaphezulu kwesigamu sphere.
I-Papyrus of Reisner (Isikhathi se-Sesostris 1er Ukubalwa kwesisekelo sethempeli, umthamo wamabhulokhi wamatshe, amapulani ophahla, izindonga, imisele nemigwaqo.
Ngemuva kwePapyrus (ubude 543 cm), ephelele kakhulu nge-arithmetic ne-algebra, izinkinga zevolumu nezikhundla, indawo (isikwele, isiyingi, unxantathu, trapezoid, unxantathu,), i-trigonometry (i-angle of slope yephiramidi, Isigaxa), amanani alingene wezinsimbi eziyigugu, ukwahlukaniswa kwenombolo ezingxenyeni ezingalingani, ukulungiswa kwezingxenyana ngenombolo 2, njll. Ngu-A. Eisenlohr owanikeza ngonyaka we-1877 ukubizwa kwezingqinamba zezinkinga ezingama-87 zale papyrus futhi kungukuqanjwa lokhu obekulokhu kulandelwa kusukela ngasekupheleni kwekhulu le-XIX.
I-Tografikhi kanye nemidwebo yezithombe ezibunjiwe emthonjeni wezithombe zaseGibhithe: cishe ngo-1100 BCE ngemephu eyaziwa ngokuthi izimayini zegolide nezinsika ezibhalwe ekhasini lobumba lika-2.82 m ubude kanye nama-41 cm ukuphakama (imnyuziyamu yaseTurin Italy). Usosayensi wokuqala owabhala umbuthano esigcawini yisazi sezibalo saseGibhithe u-Ahmès (cishe ngo-1650 BCE).
Ukuze bazitholele ebalazweni, abaseGibhithe basungula uhlelo olubizwa ngokuthi yi -downdown system okuyilona kanye olokushintshana ngokushintshana olusebenza esithombeni sendiza ukululetha kwenye yezindiza ezilandelwayo.
Lolu hlelo lwalusetshenziswa kuze kube ngekhulu le-XNUMX AD, lwabe selunikezwa uhlelo lwe-orthogonal proion.
Kufanele kuqashelwe ukuthi maqondana ne-2400 ngaphambi kwenkathi yethu amaBabiloni aseMesophothamiya asebenzisa amamephu asendulo, ku-1463 ngaphambi kwenkathi yethu abaseGibhithe badweba imephu eqondile yesibhakabhaka. IGibhithe yenza amamephu esibhakabhaka. Ukudalwa kwezinkanyezi kwezinkanyezi ethuneni le-senenmout ku-deir el Bahari kuyimephu eqondile yesibhakabhaka, unyaka we-1463 ngaphambi kwenkathi yethu, imibuthano eyi-12 imele izinyanga eziyi-12 zonyaka waseGibhithe. Maphakathi nendawo, uhlukanisa imibuthano ube ngamaqembu amabili angalingani (iqembu le-4 neqembu lama-8), unxantathu omude futhi omncane umelela uphawu lwe-meridian esicenyeni salo oyisiyingi esincane esixhunywe kwiBig Dipper (isithombe senkunzi). AbaseGibhithe babazi izinkanyezi eziyisikhombisa eziphambili zalo mfanekiso. Unkulunkulu we-hieracocephalic u-Anu uboniswa ngaphansi kwe-Big Dipper, ephethe umkhonto. Uma sinwebisa lo mbono kanye ne-meridian, imigqa emibili ihlangana eNorth Pole (ukwenqatshwa okungama-90 °), i-merrian uqobo lwayo iku-ikhweyitha (ukwenqaba ngo-0 °) ngenkanyezi i-Ursea enkulu, ithatha indawo yayo ngqo (ku-68.2 °), okuwukuncipha kwenkathi yeSenmout (1463 BCE).
Usuke usabela"Ijometri yaseGibhithe: Umnikelo we-lR ..." Imizuzwana embalwa edlule
Amadolobha ayi-100 ase-Afrika acekelwa phansi ngabaseYurophu: Kungani kungekho zikhumbuzo zomlando e-Afrika
Izihlahla zihlanganyela ukudla phakathi kwazo ngezimpande